The Hunt (2020) – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
Alicia Dean, Craig Zobel, David Bush, Harry Beckstead, Lars P. Winther, Steve Lonano
Betty Gilpin, Christopher Berry, Emma Roberts, Ethan Suplee, Hilary Swank, Ike Barinholtz, Kate Nowlin, Sturgill Simpson, Teri Wyble, Wayne Duvall
လူကုံထံလူတဈစုရဲ့ Group Chat တဈခုတှငျ အိမျတျောကွီးမှာအမဲလိုကျခွငျးနဲ့ပတျသတျပွီ
အပွနျအလှနျပွောဆိုပွီးမကွာခငျမှာ …. တဈယောကျနဲ့တဈယောကျမသိကွတဲ့ နရောစုံက
လူ ၁၁ ယောကျဟာ ဘယျရောကျလို့ဘယျပေါကျမှနျးမသိတဲ့နရောတဈခုမှာနိုးလာကွတယျ။
သူတို့ကိုဘာလို့ရှေးခယျြထားတာလဲ ဘာလို့ဒီကိုရောကျနတောလဲ ဘယျသူမှသခြောမသိကွပါဘူး။
လကျနကျသတ်ေတာကွီးထဲမှာ လကျနကျတှကေိုစယူလိုကျတာနဲ့ အမဲလိုကျပှဲကစတငျပွီး
တဈယောကျပွီးတဈယောကျ ရကျရကျစကျစကျ အသတျခံကွရတယျ။ ဒါပမေယျ့ သားကောငျ
လာပါတယျ။ ဒီကိစ်စတှဖွေဈရတဲ့ အကွောငျးအရငျးအစဈအမှနျဟာ ခယျြရီသငျးသီခငျြးလေးလို
“လိုကျလို့ပွေးတာလား ပွေးလို့လိုကျတာလား” နဲ့မုနျ့လုံးစက်ကူကပျ ဖွဈနလေို့ သခြောနားလညျ
အောငျလို့ဇာတျလမျးလေးပဲကွညျ့လိုကျကွပါတော့နျော။ ဇာတျလမျးစစခငျြးမှာပဲ သှေးသံတရဲရဲနဲ့
ထိတျလနျ့ဖှယျရာတှမွေငျတှရေ့မှာဖွဈပွီး တဈယောကျသတေိုငျး ဟာခနဲ ဟငျခနဲ ဖွဈရမယျ့
IMDb 6.4 ရထားတဲ့ဇာတျကားမြိုးလေးဖွဈပါတယျ။
လူကုံထံလူတစ်စုရဲ့ Group Chat တစ်ခုတွင် အိမ်တော်ကြီးမှာအမဲလိုက်ခြင်းနဲ့ပတ်သတ်ပြီ
အပြန်အလှန်ပြောဆိုပြီးမကြာခင်မှာ …. တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်မသိကြတဲ့ နေရာစုံက
လူ ၁၁ ယောက်ဟာ ဘယ်ရောက်လို့ဘယ်ပေါက်မှန်းမသိတဲ့နေရာတစ်ခုမှာနိုးလာကြတယ်။
သူတို့ကိုဘာလို့ရွေးချယ်ထားတာလဲ ဘာလို့ဒီကိုရောက်နေတာလဲ ဘယ်သူမှသေချာမသိကြပါဘူး။
လက်နက်သေတ္တာကြီးထဲမှာ လက်နက်တွေကိုစယူလိုက်တာနဲ့ အမဲလိုက်ပွဲကစတင်ပြီး
တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက် ရက်ရက်စက်စက် အသတ်ခံကြရတယ်။ ဒါပေမယ့် သားကောင်
လာပါတယ်။ ဒီကိစ္စတွေဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်းအစစ်အမှန်ဟာ ချယ်ရီသင်းသီချင်းလေးလို
“လိုက်လို့ပြေးတာလား ပြေးလို့လိုက်တာလား” နဲ့မုန့်လုံးစက္ကူကပ် ဖြစ်နေလို့ သေချာနားလည်
အောင်လို့ဇာတ်လမ်းလေးပဲကြည့်လိုက်ကြပါတော့နော်။ ဇာတ်လမ်းစစချင်းမှာပဲ သွေးသံတရဲရဲနဲ့
ထိတ်လန့်ဖွယ်ရာတွေမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီး တစ်ယောက်သေတိုင်း ဟာခနဲ ဟင်ခနဲ ဖြစ်ရမယ့်
IMDb 6.4 ရထားတဲ့ဇာတ်ကားမျိုးလေးဖြစ်ပါတယ်။
Alicia Dean Craig Zobel David Bush Harry Beckstead Lars P. Winther Steve Lonano
Betty Gilpin Christopher Berry Emma Roberts Ethan Suplee Hilary Swank Ike Barinholtz Kate Nowlin Sturgill Simpson Teri Wyble Wayne Duvall
Adoria K Lewis Alexander Babara Amy Madigan Ariel Eliaz Betty Gilpin Charli Slaughter Christopher Berry Dean J. West Emma Roberts Ethan Suplee Giovanni Cohea Glenn Howerton Hannah Alline Hans Marrero Hilary Swank Ike Barinholtz Iyad Hajjaj J.C. MacKenzie Jason Kirkpatrick Jeff Brockton Jim Klock Juan Gaspard Justin Hartley Kate Nowlin Lucas Eagans Lucy Golden Macon Blair Martin Harris Mikel Albagdadi Ned Yousef Reed Birney Steve Coulter Steve Mokate Sturgill Simpson Sylvia Grace Crim Tadasay Young Teri Wyble Tirol Palmer Troy Roker Usman Ally Vince Pisani Walker Babington Wayne Duvall Yosef Kasnetzkov
Option 1 storage.msubmovie.com 422 MB SD (480p)
Option2server.mfile.cloud 422 MB SD (480p)
Option3yuudrive.me 422 MB SD (480p)
Option4sharer.pw 422 MB SD (480p)
Option9server.mfile.cloud 4.6 GB FHD (1080p) DTS-HDMA 5.1
Option 10 storage.msubmovie.com 4.6 GB FHD (1080p) DTS-HDMA 5.1
Option 11 sharer.pw 4.6 GB FHD (1080p) DTS-HDMA 5.1
Option 12 yuudrive.me 4.6 GB FHD (1080p) DTS-HDMA 5.1